Ihe niile banyere Ganirelix Acetate (Ganirelix)
2. Kedu ka Ganirelix Acetate si arụ ọrụ?
3. Ihe 3 kacha elu nke Ganirelix acetate
4. Kedu ka anyị kwesịrị isi jiri ọgwụ Ganirelix Acetate (Ganirelix)?
5. Ganirelix Acetate (Ganirelix) ịdọ aka ná ntị
6. Ganirelix ihe omumu online
1. Ganirelix Acetate (Ganirelix) mmeghe
Ganirelix Acetate bụ protein sitere na mmadụ nke na-enyere aka n'ịbelata ụfọdụ hormoni na ahụ. Ọ na-adaba na otu ọgwụ ndị a maara dịka ndị na-emegide GnRH ma ọ bụ nanị ndị na-emegide ya. A na-eji ọgwụ ndị a eme ihe iji gbochie ịjụ nká. Taa Ganirelix Acetate dị ezigbo egwu n'ihi na ọ dị mfe iji ya na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ime ime ya.
2. Kedu ka Ganirelix si arụ ọrụ?
Mgbe otu onye na-enyere aka na nkà na ụzụ (ART) ma na-achịkwa hyperstimulation nke ovarian, ọ nwere ike inwe ịrị elu nke estrogen dị ka nzaghachi na ụbụrụ nke na-eme ka ọkpụkpụ. N'ikpeazụ, ọ nwere ike ịkpalite mmepụta oge mbụ nke hormone na-agụnye ihe na-eme ka ọ ghara ịmalite ime ya.
N'ihi ya, àkwá ndị a tọhapụrụ anaghị ezuzu iji nye maka ihe ịga nke ọma ma ọ bụ imepụta ya. Ọ bụ ya mere ndị ọkachamara ahụike ji esote ndị GnRH, dịka, hanrelix na gonadotrophin-na-ahapụ ndị na-egbu GnRH hormone, dịka, leuprolide iji gbochie ịhapụ mpụ na-agụnye aka na hormone luteinizing iji mee ka ọnụ ọgụgụ nke ọmụmụ ahụ bawanye.
N'ime usoro hyperstimulation a na-achịkwa, ị ga-etinye Ganirelix Acetate n'ime ụbọchị isii nke ọgwụgwọ FSH. Ganirelix na-arụ ọrụ site n'igbochi mmepụta ihe na hormone site na igbochi ndị GnRH natara na ọkwa pituitary. Ọ na-ebukwa mmebi ngwa ngwa na nke a na-emegharị anya nke na-eme ihe na-eme mgbe ọ na-eji ya n'ime ụbọchị ole na ole.
Mgbuchapụ nke hormone na-adọrọ adọrọ na Ganirelix bu ihe kariri nke hormone na-akpali akpali. Nchịkọta nke Ganirelix Acetate na-adabere na nwanyị ọ bụla ma na nkezi; a ghaghị iji ya mee ihe ruo ụbọchị anọ na ise.
Ganirelix Acetate na-arụ ọrụ site na ịchịkwa mmepụta nke mkpuchi hormone na-agụnye ya na ọ bụghị ihe ijuanya na e kenyere ndị na-agbalị ịtụrụ ime. Nke hormone a dị oké mkpa n'ịkpa nwa na maka ịmalite usoro nke luteal nke oge. Onye ọkachamara ahụ nwere ike ịmepụta hormone Luteinizing site na ịnye ọgwụ na-emepụta ngwa ngwa nke gonadotrophin mmadụ (HCG). A na-eme ya ozugbo eriri bụ nke kwesịrị ekwesị nke kwesịrị igosi ya site na nsonaazụ ultrasound (17mm ma ọ bụ ibu).
Mgbe ochichi HSG, iji FSH na Ganirelix akwụsị. Ozugbo enwere nchịkọta HCG, njedebe ikpeazụ nke oocytes na-eme, na ịzụ nwa na-eme maka usoro mkpofu oge. A pụkwara ịchọta ndị omecytes maka usoro ART, dịka, njikọta na vitamin vitamin (IVF)
Na-ekwu banyere Ganirelix Acetate uru, ọ na-akwakọba ha na ibu. O nwetara ihe niile dị mkpa iji rụọ ọrụ dị mkpa n'ịnagide nsogbu ọmụmụ. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ mmetụta Ganirelix Acetate nke na - esi na ya eme ihe;
(1) Ganirelix Acetate dị ka protein sitere na mmadụ
Ganirelix Acetate bụ protein sitere na mmadụ nke bụ decapeptide synthetic. Ndị na-edozi ụmụ mmadụ aghọwo ihe na-esote ihe dị ukwuu n'ụwa nke nkà mmụta ọgwụ n'ihi na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ adịghị adabere ha ma ọ bụ na enzymes na-eweda ha ala, n'adịghị ka ndị na-edozi ahụ.
Ndị na-edozi ahụ mmadụ na-eme ka ọ dị mma na ụdị ọrụ protein. Ganirelix acetate na-arụ ọrụ site na ibelata ọnụ ọgụgụ nke ụfọdụ hormones, ya bụ, estrogen n'ime ahụ.
(2) Generelix Acetate enyere gị aka ịchịkwa homonụ
Enweghị afọ ojuju bụ ihe ilu dị ilu iji rie onye ọ bụla. Ozugbo ị chọpụtara na ị nwere nsogbu mgbe ị na-azụ nwa, ọ nwere ike imetụta gị n'ụzọ mmetụta uche. Kasị njọ, i nwere ike iche na ọ dịghị ihe ị nwere ike ime banyere ya. Dị ka ihe siri ike dịka ọnọdụ ahụ nwere ike iyi, enwere ọganihu ahụike nke nwere ike inyere gị aka.
Otu n'ime ihe ndị mere na ụmụ nwanyị enweghị ike ịtụrụ ime bụ na ha nwere ọrịa ịba ahụ. N'ụzọ dị mma, gbasara 70% nke ndị a nwere ike ịmalite iji ọgwụ ọjọọ eme ihe. Nsogbu mgbochi bụ otu n'ime isi okwu ndị na-eme ka ọ ghara ịchọrọ nwa. Nke ahụ bụ n'ihi na usoro nkedo na-adabere na ngọngọ siri ike nke homonụ nakwa maka mkparịta ụka iji nwee ọganihu, ekwesịghị inwe ihe ọ bụla nwere ike ịkwụsị usoro ahụ.
Otu n'ime ihe ndị na-egbochi ovulation bụ mgbe ovaries enweghị ike imepụta mkpịsị mmiri nkịtị nke nsen nwere ike ịmalite. Ovulation nwere ike ọ gaghị eme mgbe nsen na-aka nká, na ohere nke njikọ fatịlaịza na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị. 2019 Kasị Nkọwa Nghọta Na Getadorelin Acetate
Otu n'ime mmetụta Ganirelix Acetate bụ na ọ na-enyere aka ịchịkwa homonụ n'oge a na-agwọ infertility na ụmụ nwanyị. N'oge mmeputara aka, enwere ike iji gbochie ihe GnRH n'elu pituitary ya na-egbochi mmepụta na ọrụ LH na FSH. N'ihi nke a, nke a na-egbochi ịmụ nwa na-emeghi agadi nke nwere ike ibute owuwe ihe ubi nke nsen azughi aka nke nwere ike ọ gaghị enyere aka karịsịa mgbe mmadụ na-eme ihe dịka in vitro fertilization.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-enweta nsogbu nsogbu ọmụmụ n'ihi nsogbu ụmụ ahụhụ, mgbe ahụ ọ bụ oge ị tụlere iji Ganirelix Acetate. Site na ọgwụ a, ị nwere ike ịmalite njem gị iji na-elekọta nne na nna.
(3) Mmetụta ndị ọzọ mgbe ị jikọtara ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ
Na ọgwụ ndị ọzọ, Ganirelix Acetate na-eji agwọ ọrịa na ụmụ nwanyị. Ozugbo ị na-etinye Ganirelix acetate, a na-eme ihe ahụ n'ahụ gọọmenti na-eme ka ọ bụrụ nke na-eme ka mmepụta nke homonụ na-eme ka ọganihu na mmepe nke àkwá.
N'oge gara aga, a na-eji Lupron n'ọnọdụ Ganirelix acetate iji gbochie onye ahụ na-agwọ ọrịa site na ịmalite ịmalite ime nwa. Mgbe a na-eji ya eme ihe, ọ ga-akpali ahụike ahụ maka ụbọchị ole na ole wee kwụsị ya. Ya mere, otu onye ga-eji ya mee izu ole na ole tutu ya amalite ịmalite ọgwụ ọgwụ maka mkpali nke ovaries.
N'ihi ya, ọtụtụ ndị inyom mepụtara cysts na ovaries, bụ ọnọdụ nke na-agbatịkwu oge ịmalite iji ọgwụ emezi.
Otu n'ime mmetụta Ganirelix bụ na ọ naghị enwe usoro mmegharị ahụ; kama, nkwụsị nke pituitary na-apụta ozugbo. Ya mere, enwere ike ịmalite ọgwụ tupu ịmalite ịṅụ ọgwụ. Ụbọchị anọ na ụbọchị isii mgbe ịmalitere ịṅụ ọgwụ mịpụtara bụ oge kachasị mma iji gbanye Ganirelix Acetate. Ihe atụ nke ọgwụ ọmụmụ na Ganirelix Acetate bụ Follistim na Gonal F.
Gwa dọkịta gị gbasara ihe ndị ọzọ gbasara iji ya Ganirelix Acetate ogwu.
(1) Ganirelix Acetate (Ganirelix) ogwu?
Ozugbo ị nọ n'ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ n'ime ọgwụ mgbochi na-akpali akpali (FSH), ị nwere ike ugbu a ịmalite iji ọgwụ Ganirelix Acetate. 250mcg nke Ganirelix Acetate ọgwụ na-edozi subcutaneously otu ugboro kwa ụbọchị. A na-etinye Ganirelix acetate ịmịnye n'ime etiti oge na-egbu oge.
Ị nwere ike ọ gaghị achọ ijikwa FSH dị oke oge n'oge a n'ihi ụbụrụ FSH na-ahụ maka ọdịmma.
Ị ga-anọgide na-eji ọgwụgwọ Ganirelix Acetate ruo ụbọchị ị ga-enye Chorionic Gonadotrophin mmadụ (hCG). Enwere ike ime ihe na-emepụta iji chọpụta na e nwere ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ụbụrụ nke dị nha nke ọma ma ọ bụ mgbe ahụ ka a na-enye hCG iji mee ka ụbụrụ dị elu.
Otú ọ dị, ọ dịghị mgbe a ga-enyefe na HCG n'ọnọdụ ndị na-eme ka ovaries gbasaa n'ụzọ dị njọ. Ọ bụrụ na a na-enye ya n'ụbọchị ikpeazụ nke ọgwụgwọ FSH ọ nwere ike iduga na mmepe nke OHSS (ọrịa ovarian hyperstimulation)
(2) Ịgbanye Ganirelix Acetate (Ganirelix) site na nzọụkwụ
Dịkarị, Ganirelix Acetate ntụ ntụ (129311-55-3) a na-enye ọgwụ ntụtụ na sringe na-adịghị edozi ahụ bụ nke a na-ejikarị emikpu ma na-edozi ya na subcutaneously. Mgbe anyị na-ekwu okwu banyere ịṅụ ọgwụ dị n'okpuru, ọ pụtara na Ganirelix Acetate injected under skin.
Mgbe a na-ejide onwe ya, a na-eji mkpịsị mkpịsị aka gbanye ọgwụ ahụ n'ime akwa anụ ahụ dị n'etiti anụ ahụ na akpụkpọ ahụ. Maka ọgwụ ogwu a na-eji aka ya eme ihe, ọgwụ ahụ na-etinye n'ime usoro ahụ na nwayọọ nwayọọ ma na-ejikarị mee ihe mgbe usoro ndị ọzọ nke nchịkwa adịghị dị irè.
Tupu ịgbanye Ganirelix Acetate, lelee ihe ọ bụla ma ọ bụ nchọpụta. Ọ bụrụ na ịchọta nke ọ bụla, anaghị eji ya.
Ebe ọ bụ na Ganirelix Acetate bụ ntakịrị olu, ọkpụkpụ subcutaneous kachasị mma dị ka ọ bụ ụzọ kasị dịrị nchebe na nke bara uru iji nweta ọgwụ ahụ n'ime ahụ. Nke a bụ otu i kwesịrị isi jiri Ganirelix Acetate ogwu ụkwụ site nzọụkwụ;
Chọọ maka ebe dị mfe maka ogwu ogwu. Ebe ogwu ahụ dị oké mkpa mgbe ọ na-abịa n'ịnye nkedo subcutaneous. Ganirelix Acetate ọgwụ ga-etinye ya n'ime anụ abụba dị n'okpuru akpụkpọ ahụ. Ụfọdụ n'ime akụkụ ndị dị n'ime ahụ anyị nwere ntanetị anụ nwere ike ịnweta ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ. Akụkụ ahụ ndị a kachasị mma maka ọgwụ ahụ dị otú ahụ n'ihi na ozugbo a na-agbazi ahịrị ahụ, ọ gaghị abụ na ọ ga-akụ ọkpụkpụ, ahụ ike ma ọ bụ arịa ọbara. O nwere ike ịbụ n'afọ, gburugburu bọtịnụ aka ma ọ bụ ihe dịka sentimita abụọ site na otu. O nwekwara ike ịbụ na ụkwụ ụkwụ.
Hichaa aka gị. Jiri aka mmiri na ncha saa aka gị iji gbochie onwe gị pụọ na ọrịa ọ bụla. Gbaa mbọ hụ na ị na-ehichapụ ebe dị n'agbata mkpịsị aka gị, n'okpuru mbọ aka na n'azụ aka gị. Ị nwere ike ịgbatị aka gị ma ọ dịkarịa ala abụọ sekọnd, asacha ma sachaa ahụ.
Chịkọta ihe ndị ị ga-achọ. Ha nwere ike ịgụnye sirinji nwere ọgwụ, swabs na akpa mgbochi nke ị ga-achọ mgbe ịchọrọ ịhapụ sirinji ahụ na mkpa.
Dị ọcha ma nyochaa ebe ogwu ahụ. Nyochaa ebe ogwu ahụ iji jide n'aka na ọ dịghị ọkpụkpụ, nkpuchi, ike, ọkụ ma ọ bụ mgbakasị na mpaghara ahụ. Hichaa saịtị ahụ na disinfectant iji kpochapụ nje ọ bụla na saịtị ahụ. Dị ọcha maka sentimita abụọ na mpaghara ahụ iji jide n'aka na ndị germs agaghị abanye na saịtị ahụ. Chere ka disinfectant kwụsị ma ọ dịkarịa ala otu nkeji tupu ịkwaga ọzọ.
Jidesie sirinji elu wee wepu mkpuchi nkedo.
Bunye nnukwu akpụkpọ anụ n'etiti mkpịsị aka gị na mkpịsị aka. Ọ na-enye aka ịdọpụ anụ ahụ na-esi n'ite ahụ pụọ ma mee ka usoro ahụ dịrị gị mfe karị. Gbaa mbọ hụ na maka ogwu ọ bụla ị na-enye, ị ga-ahọrọ saịtị dị iche iche. Nke ahụ na-enye aka gbochie imebi ebe ahụ.
Na akpụkpọ ahụ ka na-agbanye ọkụ, tinye nịịlị ahụ n'okpuru isi akpụkpọ ahụ n'otu akụkụ nke 45-90% n'ime anụ ahụ.
Rịba ama na mgbe ị na-edozi sirinji n'ụzọ ziri ezi, ọ ga-esi ike ịdọrọ azụ azụ. Ọ bụrụ na ị hụrụ ọbara ọ bụla abanye n'ime sirinji ahụ, ọ pụtara na nkedo nkedo amịwo okwute ma ọ bụ vein. Ihe ị ga-eme bụ iji wepụ obere agịga obere ma weghachite ya n'enweghi iwepu agịga ahụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịtụle iwepu agịga ahụ kpamkpam na iji ọgwụ sirinji ọhụrụ, nke na-adịghị edozi ahụ, nke na-esi ike. Were akwa nke nwere disinfectant ma tinye ya na saịtị ịgbawa ma tinye ụfọdụ nrụgide. N'ihi ya, ebe ogwu ahụ kwesịrị ịkwụsị ọbara ọgbụgba n'ime otu minit ma ọ bụ abụọ.
Tinyegharịa nzọụkwụ ma hụ na edozila agịga. Ugbu a, ị nwere ike iwelata obere ihe ahụ na obere nwayọọ. Nke ahụ ga-achọpụta na ihe ngwọta na-enweta nke ọma na-emetụta ya n'otu oge ahụ, ọ naghị ahapụ akpụkpọ ahụ gị. A ghaghị inye ọgwụ niile n'ime ọgwụ ahụ na sirinji.
Wepu sirinji ngwa ngwa ma tinye akwa nke nwere disinfectant na saịtị ahụ. Echefula itinye ụfọdụ nrụgide ka ọ na - enyere aka igbochi ọbara ọgbụgba. Ị nwere ike ịhụ obere mmerụ ozugbo ị mere, mana nke ahụ ekwesịghị ichegbu onwe gị. Ọ na-adịkarị, ị ga-apụ ọbụna tupu ị hụ.
N'adịghị egwu, a ga-eji sirinji mejupụtara tupu e jiri ya mee ihe n'otu oge ma ghara ịkekọrịta. Ozugbo emere gị, dozie nke ọma iji zere mmerụ ma ọ bụ ihe mberede.
Dị ka usoro ọgwụgwọ ọ bụla, enwere ike ibute ọrịa. Ọ bụrụ na ịchọta ihe ọ bụla na-acha uhie uhie, ọzịza, oké mgbu ma ọ bụ ọkụ, hụ dọkịta ozugbo.
Ọ dị mma na tupu i kpebie ịṅụ ọgwụ a, ị ga-amata ịdọ aka ná ntị Ganirelix. Ozi a dị oke egwu n'ihi na ozugbo ị gụrụ ya, ị nwere ike ịkọ ma ọ dị mma ka ị gbanye Ganirelix Acetate ma ọ bụ.
Dịka ị nwere ike ịchọrọ ọgwụ a nke ukwuu, ha bụ ụfọdụ ọnọdụ ị nwere ike ịta ahụhụ site na nke a nwere ike ime ka ọgwụ a dị ize ndụ nye gị. Ụfọdụ nwere ike ọ gaghị abụ ọrịa ma ọ bụ nsogbu ndụ. Lee ụfọdụ ịdọ aka ná ntị Ganirelix nke nwere ike imetụta ya.
Ganirelix ekwesịghị ka ndị ọrịa a maara na ha na-ata ahụhụ na ọgwụ a ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị n'ime ọgwụ a. Ọ na-agụnye ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na mgbapụta nke oge oyi ebe ọ bụ na ọhụụ a na-ahụ anya nke anyarelix nwere caber / latex.
Ndị ọrịa ndị nwere akụkọ ihe mere eme na Gonadotrophin-Releasing Hormone (GnRH) ịkpụnye analogs hypersensitivity ekwesịghịkwa ịgbanye Ganirelix Acetate. Nke ahụ bụ n'ihi na ime nke ahụ ga-eduga ná mmeghachi omume dị njọ ma ọ bụ anaphylaxis.
E nweela ihe gbasara mmeghachi omume nke ịdị ọcha, dịka, mmeghachi omume anaphylactoid nke a kọọrọ ọbụna mgbe ọ gachara nke mbụ. Ka a sịkwa ihe mere ndị inyom na-ata ahụhụ site na ọrịa na-arịa ọrịa siri ike ka ha ghara ịṅụ ọgwụ a. Ọ bụrụ na ịchọrọ Ganirelix Acetate ma ọ bụ ọgwụ ndị ọzọ dị ka nafarelin (Synarel), goserelin (Zoladex), leuprolide (Lupron, Eligard), mgbe ahụ ị kwesịrị izere ya.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na gị hypothalamic-pituitary tract ma ọ bụ onye na-anabata nwanyị, mgbe ahụ ọ dịghị mkpa inject Ganirelix Acetate ntụ ntụ n'ihi na ọ gaghị abụ enyemaka ọ bụla. Ihe kpatara nke a bụ na ovarian hyperstimulation nwere ike ọ gaghị enyere aka na isi ovarian adaba.
Tupu ịmalite ọgwụgwọ Ganirelix, ị kwesịrị ịma usoro nlekota nke ịkwesịrị ime. Ọ bụrụ na ị chọpụta ihe mgbaàmà ọ bụla nke nwa nwanyị na-amụba, ị ga-ahụ dọkịta ozugbo. Ha nwere ike ịgụnye pelvic ma ọ bụ mgbu abdominal, vomiting, ọgbụgbọ, ascites (mgbarụ ma ọ bụ mmiri n'ime afọ) ma ọ bụ uru bara uru. Na-eduzi na Uru Uru na Egwu Ejila
Kwụsị iji ụdị ọmụmụ ọ bụla gụnyere nke Ganirelix ma ọ bụrụ na ị mepee ọrịa ọbara ọbara ọbara nke ovarian (OHSS) ma ọ bụ onye na-azụ ụmụ nwanyị. Ị nwere ike ọ gaghị achọpụta na ọ bụrụ na ị kwụsịrị iji Ganirelix acetate mee ihe ruo ụbọchị ole na ole. Ejila iji ya ọzọ ruo mgbe ogo ugo laghachi azụ.
A na-atụ aro na tupu ịmalite ọmụmụ ọmụmụ, a ga-enyocha ule pelvic nke gụnyere ultrashon ultrasounds na ndị inyom nile na-arịa ọrịa n'oge na tupu ha amalite usoro ọgwụ ọjọọ ọmụmụ. Ndị ọrịa nwere polycystic ovary syndrome (PCOS) na-enwe mmetụta nke ukwuu banyere gonadotrophins ma nwee ike igosi mmeghachi omume na-emebiga ihe ókè iji mee ka usoro ọbara hyperstimulation nke ovarian.
Ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ị na-arịa ọrịa hyperstimulation nke ovarian bụ nnukwu concentrated serum estradiol (nke ahụ karịrị 400pg / ml) tupu gọọmenti HCG, inwe ahụ ahụ dị mma ma bụrụ nwata.
Nnyocha e mere banyere otú Ganirelix Acetate si arụ ọrụ n'ịgwọ infertility na ụmụ nwanyị, enweghị ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ụmụ nwanyị geriatric. Ya mere, Ganirelix Acetate adịghị atụ aro ka a jiri ya mee ihe n'ime ndị inyom meworo agadi na-achọ ilezi nsogbu ha anya.
Ọrịa na-ekesa ọrịa, mmerụ ahụ
Enwetabeghị nchọpụta na mmetụta Ganirelix n'ahụ ndị ọrịa na-enwe mmerụ ahụ ma ọ bụ ọrịa na-agwọ ọrịa. Onye ọ bụla nke na-ata ahụhụ n'ụdị ọnọdụ a gbara ya ume iji nlezianya jiri ọgwụgwọ a mee ihe.
Ganirelix abanyebeghị ma ọ bụ nchekwa ma dị irè maka iji ya mee ihe na ụmụaka. A na-enye ịdọ aka ná ntị Ganirelix maka iji ya mee ihe na ụmụaka n'okpuru afọ iri na asatọ.
Ganirelix Acetate ntụpụ na-eme ka GnRH kwụsị, ọ bụ ya mere ọ dịghị atụ aro ya iji mee ihe na ụmụ nwanyị na-enye nwa ara. Ọ bụrụ na nne na-enye nwa ara na-ekpebi iji Ganirelix Acetate, mgbe ahụ ya kwesịrị ịtụle iji ụzọ ọzọ nke nri maka nwa ha. A mabeghị ma Ganirelix nwere ike ịbanye n'ime mmiri ara ara.
Ịṅụbiga mmanya ókè, ịṅụ sịga
Ịṅụbiga ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya dị ka biya ma ọ bụ ethanol na ịṅụ sịga nwere ike ibelata ọmụmụ ma ọ bụ irè ọgwụgwọ ọmụmụ na ụmụ nwoke na nwanyị. Mgbe mmadụ na-eji Ganirelix ma ọ bụ na ọ bụ na ọgwụgwọ ọ bụla ọzọ, a gwara ha ka ha zere ịṅụbiga mmanya na ụtaba ókè.
Ọ bụghị ihe amamihe dị na ya iji Ganirelix emechaa mgbe imechara ya. Tupu ịmalite iji Ganirelix Acetate (129311-55-3), a ghaghi ime ka ule ime ime ka o wepuo ya.
N'ime nnyocha e mere na ụmụ ọhụrụ nke 283 bụ ndị nne ha na Ganirelix nọ na-elekọta, ọ gosiri na ọnụ ọgụgụ nke ọrịa ndị na-adịghị na ya bụ 3 na 18 na-abịanụ. Ihe ndị na-akpata isi gụnyere Beckwith-Wiedemann Syndrome, omphalocele na hydrocephalus / meningocele. Nwatakịrị gụnyere hydronephrosis, ọrịa na-adịghị mma, hydrocele, hernia inguinalis, hernia umbilical, occiput / handy hand crease, torticollis / elu palate, subluxation hip, mkpịsị aka akara aka, adụkpọ ụkwụ, torticollis / okpokoro akpaka, hemangioma, na sacral sinus. Ha nwekwara ike ịgụnye mkpado akpụkpọ na nevus.
Otutu ihe na-adighi emetuta na ozo nke Ganirelix acetate bu uru bara uba, oria ohia, bloating na abdominal or stomach pain.
Ndị na-adịghị ahụkebe gụnyere;
Ike ọgwụgwụ ma ọ bụ ike ọgwụgwụ,
akpụkpọ anụ ọkụ, hives, itching
Mgbapu ma ọ bụ obi ike nke nku anya, gburugburu ihu, anya, egbugbere ọnụ, na ire
Ọ na-esiri ike mgbe ọ na-elo
6. Ganirelix isi na ntanetị
E nwere ọtụtụ Ganirelix isi mmalite na ebe nrụọrụ weebụ, ma ịntanetị na-eti ha niile ọnụ. Site n'ịchọta ahịa ka mma iji zere ìgwè mmadụ ahụ, e nwere ọtụtụ ihe kpatara ịzụta Ganirelix Acetate online ji dị mma karịa inwe ịga ileta ụlọ ahịa. Taa, e nwere ọtụtụ ndị na-azụ ha Ganirelix Acetate online, m ga-agwa gị ihe mere.
Na ịzụ ahịa n'Ịntanet, ị gaghị azụta Ganirelix Acetate ma buru ya gburugburu. Inwe ya n'akpa gị kwa ụbọchị, mgbe ị ga-achọkwa ịme ihe omume ndị ọzọ nwere ike ịbụ ihe mgbu. Ị na-enyocha akpa gị maka egwu na ọ nwere ike ịwụfu ya. Mgbe ụfọdụ ị ga-emechu ihu mgbe enyi gị ị na-achọghị ịmara na ị nọ na ọgwụ na-ahụ ya na akpa gị. Iji zere nchegbu niile, zụta Ganirelix Acetate online wee nye ya ya n'ọnụ ụzọ gị.
Ị ga-enwe mmasị na nzuzo nke na-abịa mgbe ị zụta Ganirelix Acetate online. Ọ dịghị onye ga-ama na ị na-alụso nsogbu na-enweghị isi nsogbu. Ikwesighi ịbanye na ụlọ ahịa ma nweta nke ahụ dị egwu mgbe ị rịọrọ Ganirelix Acetate. Na ịntanetị, ọ dịghị onye ga-agba akaebe maọbụ kpee gị ikpe site na ịzụta ị na-eme. O di nwute, ị nwere ike ịzụta Ganirelix Acetate online wee nye ya na amaghi aha ya.
Ọ bụ ihe nzuzo kpamkpam maka ịchọta ụzọ ị ga-esi merie nsogbu ọmụmụ. Ya mere na oge ọzọ ịchọrọ ịzụta Ganirelix Acetate, ị nwere ike ịzụta ya na ịntanetị, ndị na-anụ ọkụ n'obi agaghị ama ihe ị na-arịgo.
O nwere ike ịzụta obere ego gị ma e jiri ya tụnyere ịga ije na ụlọ ahịa. Ọnụ ego Ganirelix nwere ike ịdalata na ntanetị ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ụlọ ahịa na-abaghị uru ebe ọ bụ na ụlọ ahịa na-echekwa ihe dị ntakịrị na-efu. Otu ihe ọzọ kwesịrị ime ka ị zụta ọgwụ ọjọọ a bụ na ọ gaghị adị mkpa ka ị rụọ ọdụ ụgbọelu na nnukwu ụlọ ahịa na-echere ka ị jee ozi. Ige nti egwu nke 1980 ka ị na-eche ọtụtụ iri mmadu n'ihu gị ka ịzụta ihe ha nwere ike iwe iwe.
Iji zere ihe niile a na-eme, họrọ laptọọpụ gị ma ọ bụ ekwentị gị, nọdụ ala n'ihe ndina gị dị mma na otu iko nke tii na bisikii ma nye iwu na nkeji.
Ọ bụrụ na ịchọrọ na ịchọrọ Ganirelix Acetate na-ejupụta ma ghara inwe oge ị ga-esi na ụlọ ahịa iji chekwaa ịchọta ya, mgbe ahụ ịzụta ịntanetị bụ mkpebi kacha mma i nwere ike ime. Ị gaghị echefu ọgwụ dịka ihe nchekwa gị ga-ezu n'ime oge kachasị dị mkpirikpi. Nweta ya ozugbo ị hụrụ na ịchọrọ imeju na ị gaghị agbapụ ya.
Otú ọ dị, iji nweta usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị, ị ghaghị ịkpachapụ anya ebe ọ bụ ahịa dịka ọ bụla ọzọ. Na ịntanetị, e nwere ma ndị na-ere ahịa ziri ezi na ndị na-agba akwụna ga-ere ọgwụ ọjọọ na ego Ganirelix dị oke ala. Ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị enwe ihe mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ nke ịchọrọ, ya mere ị nwere ike ịhapụ ndị Ganirelix uru ị na-arụ.
Ndị ọgwụ ndị ọzọ nwere ike ịnwe ihe ndị dị egwu anaghị edepụta, nke ahụ nwere ike inwe mmekọrịta na-atụghị anya ya na ọgwụ ndị ọzọ ị na-aga. Kasị njọ, ọ nwere ike ime ka ị na-ata ahụhụ site na mmetụta dị egwu ma ọ bụ nsogbu ahụike. O nwere ike ọ gaghị edozi ọgwụ ndị ọzọ, dịka, na njikwa nke okpomọkụ dị mkpa ma nke a nwere ike ime ka ọgwụ ahụ ghara ịdị irè. N'ihi ya, ịnwere ike iji ego gị na ọgwụ ọjọọ ma hụkwa uru Ganirelix.
Phcoker.com bụ ebe kachasị mma ị nwere ike ịzụta Ganirelix Acetate (129311-55-3). N'ebe a, ị ga-achọta ego Ganirelix kasịnụ ma nweekwa obi ụtọ nke ọrụ ndị magburu onwe ya nke ga-enye gị udo nke uche n'oge usoro ahụ.
Anyị nwere otu ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa nke raara onwe ha nye bụ ndị dị njikere ijere gị ozi ngwa ngwa ma dị mma dị ka o kwere mee. Ọzọkwa, anyị Ganirelix ọnụahịa dị oke ọnụ ọnụ, ma ị nwere ike ijide n'aka na ọ bụ enyi karịa ihe ị na-akwụkarị. Anyị na-achọ mgbe nile ka Ganirelix na-efu ala n'ihi na anyị na-eche banyere akpa gị. Ọzọkwa, ọ dịghị ihe ọzọ zoro ezo zoro ezo site na Ganirelix ọnụahịa na weebụsaịtị.
Àgwà anyị kacha mma ị ga-enweta n'ahịa. Ị nwere ike ịdabere na anyị na ahụ ike gị n'ihi na anyị bụ ebe a pụrụ ịtụkwasị obi nke ga-enye gị ezigbo ọrụ. Anyị na-emesi gị obi ike na ị ga-enweta Ganirelix Acetate dị ọcha, nke a na-adịghị edozi. Ozugbo i jiri Ganirelix Acetate nyere iwu site na anyị, ị ga-agwa onye dị iche iche site na ụlọ ahịa ndị ọzọ n'ihi na anyị na-enyefe ihe karịrị atụmanya gị.
Anyị ghọtara na ezi ahụike bụ azụ nke ibi ndụ dị mma. N'iburu nke a n'uche, anyị bụ Ganirelix iyi nke ga - enye gị ọsọ ọsọ, ụgwọ dị ala, ezigbo Ganirelix Acetate (129311-55-3) na nkwado ọ bụla ọzọ ị ga - achọ n'aka anyị.
Kwenye na Ganirelix kasị mma ma jiri obi ụtọ malite ịba uru Ganirelix taa.
Biotechnology na Biopharmaceuticals: Ngwadogwu na-agbanwe agbanwe ma na-abanye na ọgwụ ọjọọ, peeji nke 327
Usoro uche nke ọgwụ na nkà mmụta ọgwụ, Thomas L. Lemke, David A. Williams, peeji nke 231
GenRx nke Mosby: Nkọwapụta Ngwakọta maka Nkọwapụta Ndenye na Nkọwapụta Mbinye ọgwụ, Nkọwapụta Gọọmentị Nkọwapụta Akwụkwọ Nkịta, Mosby 2001, peeji nke 1133-1134